Ibhedi etofotofo eyi-2 iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex - I-Airbnb
Ibhedi etofotofo eyi-2 iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJules
Iflethi yethu etofotofo eneflethi okanye indlu ekwicomplex enendawo yokupaka (engasentla kwendlu yethu) efumaneka ngemoto yabucala. Sisezingeni eliphezulu. Uhamba nje imizuzu eyi-10 ukuya eSt Aubins beach nakwiziko lezemidlalo lamanzi nemizuzu eyi-15 ukuya kwiivenkile zokutyela neevenkile zaseSt Aubins Village. Indawo yokuma yeBhasi yimizuzu eyi-2 xa uhamba ngeenyawo kwaye iSt Helier yimizuzu eyi-10 xa uqhuba. Iflethi okanye indlu ekwicomplex ibonakala kakuhle kwibhalkhoni yabucala. Inayo yonke into onokuyidinga ukuze ube nekhaya elitofotofo usekhaya.
Le yiflethi okanye indlu ekwicomplex egcinwe kakuhle nenefenitshala eyenzelwe intsapho nabahlobo ukuba bayityelele. Inikezela ngenkululeko kunye nayo yonke into onokuyidinga ukusuka ekhitshini ukuya kumatshini wokuhlamba impahla.
4.70 · Izimvo eziyi-63
IJersey sisiqithi esihle esikwiimayile eziyi-9 x iimayile eziyi-5 ezinabantu abayi-100 000. Kukho iilwandle ezininzi kakhulu, iivenkile zokutyela eziliqela ezineenkwenkwezi ze-michelin kwaye kukho inkcubeko ephithizelayo yonxweme. Siseyindawo yokuphosa amatye kuyo yonke into kwaye yonke into iyafikeleleka. Ukusefa, ukuhamba emaweni, ukuhamba elwandle, ukutyibiliza emanzini kunye nokuthenga eSt Helier. Kukho imisitho yonyaka evela kwimibhiyozo yomculo, umboniso wesikhephe, umdyarho wesikhephe esinamandla, umdyarho wamahashe kunye neendawo ezintle zabakhenkethi, Sonke sinayo yonke le nto... Idolophu yaseSt Malo eFransi ikumgama weyure eyi-1 yokuhamba ngesikhephe,
Siyakuthanda ukutya kwaye singakunika uluhlu lweevenkile zokutyela esizithandayo kunye neekhefi zaselwandle.
Owner /manager of The Lookout Beach Cafe & Restaurant, First Towe…
Siyakuvuyela ukudibana nabantu kwaye le yinxalenye yomtsalane wokwenza iflethi yethu ifumaneke kwiindwendwe, ngoko siyakuvuyela ukuthetha nokucebisa ngeendawo onokuya kuzo kunye nezinto onokuzibona kwisiqithi sethu esihle. Siyaqonda nokuba ezinye iindwendwe zikhetha ukushiywa zodwa ngoko ukudibana neendwendwe kuyahluka kuxhomekeka kwiimeko. Ukuba ungumhambi ohamba yedwa kwaye ukhangela inkampani okanye ulwimi lwesiNgesi, kuxhomekeka ekufumanekeni kwethu siyakuvuyela ukuncokola.
Siyakuvuyela ukudibana nabantu kwaye le yinxalenye yomtsalane wokwenza iflethi yethu ifumaneke kwiindwendwe, ngoko siyakuvuyela ukuthetha nokucebisa ngeendawo onokuya kuzo kunye ne…